သင်လူ့ ပြည်ကို ဘာအတွက် လာပါသလဲ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
သင်လူ့ ပြည်ကို ဘာအတွက် လာပါသလဲ
ရေးသားသူhla moe 24 on April 10, 2012 at 9:40am in ဆွေးနွေးခြင်း
မိတ်ဆွေ သင့်ကို မေးပါမယ်
လူ့ ပြည်ကို ဘာလာလုပ်ပါသလဲ
လူ့ ပြည်ကို ဘာအတွက်ေ၇ာက်လာပါသလဲ
သင် တာဝန် ကျေသော သူတယောက် ဖြစ်ပြီလား
ရင်ထဲ ရှိတာ ပြောပေးပါလား ဘလော့အမျိုးအစားခွဲရန်(ဥပမာ.စာပေ.ဗုဒ္ဓ၀င်.....)
Like မျှဝေရန်..မိတ်ဆွေထံသို့ Twitter
▶ အထက်ပါအကြောင်းအရာကို boxထဲတွင်အသစ်ဆွေးနွေးရန်
Permalink hla moe 24 သည် April 10, 2012 9:50amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ လူမိုက်သည် ငွေတခုဘဲးရှာသည်
လူတော်သည် ငွေ ရယ် ကုသိုလ် ရယ် ရှာပါသည်
ငွေသည် လူ့ဘုံတခုထဲး သုံးလို့ ရပါသည်
ကုသိုလ်သည်ကား ဘုံ အားလုံး မှာ သုံးလို့ ရပါသည်
Permalink နီစံ (အနီ) သည် April 20, 2012 4:35amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကုသိုလ်သည်ကား ဘုံ အားလုံး မှာ သုံးလို့ ရပါသည်
တကယ်ကိုမှတ်သားစရာပါ..ကိုကြီး လှမိုး..ကျေးဇူးပါ..သာဓု သာဓု သာဓု ပါ
Permalink နီစံ (အနီ) သည် April 20, 2012 4:34amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကိုအောင်နိုင် ဆွေးနွေးသွားတာလေး သိပ်ကောင်းတယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Permalink ကလေးတို.ဆရာမ သည် July 13, 2012 6:23pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ “လူ့ ပြည်ကို ဘာလာလုပ်ပါသလဲ - လူ့ ပြည်ကို ဘာအတွက်ေ၇ာက်လာပါသလဲ -
သင် တာဝန် ကျေသော သူတယောက် ဖြစ်ပြီလား“
ဆိုတဲ့ “ သမီးလေး အနီ“ ရဲ့ မေးခွန်းကို တိုက်ရိုက်ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုပါရင်(လျှင်) - မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ “ လူပြည်သို. ဖြစ်စေ- နတ်ပြည်သို.ဖြစ် “ ကို မရည်ရွယ်ခဲ့ကြပါ- မမျှော်မှန်း မရည်ရွယ်ပါပဲ ရုတ်တရက် ရောက်လာခဲ့ကြခြင်းသာပါ-
ဒါကလည်း မိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုယ် အ-ကုသိုလ် ၊ ကောင်းမှု မကောင်းမှုတွေအပေါ်မှာ မူတည်နေတာပါပဲ - တရားတော်များမှာလည်း ဒီလိုတကယ့် ဖြစ်ရပ်ဇာတ်လမ်းလေးများကို မကြာခဏ နာကြားလေ့လာမိပါတယ် -
Permalink ၄၄၂ဇော်နိုင် သည် July 18, 2012 10:28pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကျေးဇူးပဲဗျာ ဒီစာသားကိုဖတ်မိတာနှင့် အသိတရားတစ်ခု ရသွားလိုက်ပါတယ်ှရှင်သန်ရာဘ၀မှာ လူပီသကြပါစေဗျာ
Permalink မှတ်ကျောက် သည် July 19, 2012 11:16amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကာမတဏှာမကုန်သေးသေ၇ွ့ကာမဘုံဖြစ်တဲ့ လူ့ဘုံလည်း မထင်မှတ်ပဲ ဖြစ်စေ ထင်မှတ်လျက်(ဥပမာ အရှင်နာဂသိန်၊တူသိတာနတ်သား)ဖြစ်စေ ရောက်လာနိုင်ပါတယ် ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ စည်းမလွတ်ဘောင်မလွတ်ပြောရရင် ဥစ္စာ၊ပညာ၊ကုသိုလ် ဆိုတဲ့ သုံးခုကို မိမိအသက်နဲ့ အလျော်အစားလုပ်ပေးဆပ်နေရတဲ့ စက္ကန့်တိုင်း(တစက့န့်သုံးစွဲပြီးတိုင်းမိမိအသက်တစက္ကန့်လျော့သွားပါပြီ ဘာပြန်ရလဲဆိုတာ?)မှာ တစ်ခုခုကိုရယူသင့်ပါတယ်လို့ယူဆမိပါတယ်...ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ် ချက်က ယောနိသောမနသိကာရကိုအခြခံပြီး ကုသိုလည်တွေရသလောက်ယူမလို့လို့ ခံယူမိပါတယ်
Permalink ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည် July 24, 2012 5:57pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကိုကြီး ညီတခုချင်းဖြေမယ်နော်......
အကြောင်းအထောက်အပံ့ကောင်းလို့ ဘာရယ်မှန်းမသိပဲ လူ့ပြည်ရောက်လာပေမယ့် ရောက်ပြီးမှသိရတာကတော့...............
(၁) ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ များများပြုပြီး ကိလေသာ နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်လုပ်ဖို့ပါ။
(၂) ဒါန၊ သီလ ကို အရင်းပြုပြီး ဘာဝနာ(ဝိပဿနာ) အားထုတ်ရင်း ကံအထောက်အပံ့ မကုန်ခင်မှာ ဖြစ်ပျက် မြင်ပြီး မဂ်ဖိုလ်ဆိုက်အောင်အားထုတ်ဖို့ပါ။
(၃) ကျွန်တော် တာဝန်ကျေအောင် ထမ်းဆောင်ဆဲပါ။
Permalink hla moe 24 သည် July 25, 2012 8:06pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီငယ်..လူ့ ဘဝဟာ အလွန်အင်မတန်မှ ရခဲးတာရယ် သာသနာနဲ့ တွေ့ ကြုံဘို့ ဟာလဲး
Permalink ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည် August 8, 2012 12:41pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုကြီးရဲ့မေးခွန်းတွေက ထိမိလွန်းလှပါတယ်။
Permalink သုဝဏဘူမိသူလေး သည် September 30, 2012 11:18pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင် လူပြည်ကိုဘာလာလုပ်ပါလဲ?
Permalink hla moe 24 သည် October 7, 2012 11:54amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ အခုမှ ဒီစာလေးပြန်ဖတ်မိလို့သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ခေါပါတယ်ဗျာ
Permalink kalatwai5 သည် August 8, 2012 1:03amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ လူ့ပြည်ကိုဘာလာလုပ်ပါသလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းနှင့် ဘာတွက်ရောက်လာပါသလဲမေးခွန်းက သိပ်ပြီး မကွာဘူးလားလို့ပါ။ တာဝန်ကျေသောသူတယောက်ကတော့မဖြစ်သေးပါ။ အများကြီးလိုပါသေးသည်။ သင်ယူစရာတွေလဲအများကြီးပါ။ ကြိုးစားရပါအုံးမည်။
ကျောက်ဆည်မြို့ ရွှေသာလျှောင်းတောင်တော် ငြိမ်းချမ်းရေးကျောင်းတိုက် ပြန်လွန်တော်မူပြီးသော ဆရာတော် ဦးဝိသုဒ္ဓ ဟောကြာတော်မူသော တရားတော်များ
Top News · Everything ၄၄၂ဇော်နိုင် commented on dimplemit's blog post 'အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ'"ကျေးဇူးပါ"1 hour agoဖိုးကံထူး posted photos 11 more…1 hour ago၄၄၂ဇော်နိုင် commented on မူကြိုဆရာ's blog post '“ကိုယ်ကျင့်သီလ ကောင်းသူနှင့်သာ ပေါင်းဖော်ပါ”'"သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ"1 hour agoaung aung soe commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး'"ဖတ်မှတ်သွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။"2 hours agodimplemit posted blog postsအတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံဒုက္ခများမြောင် လူတို့ဘောင်ဝယ်2 hours agoaung aung soe commented on dimplemit's blog post 'ဒုက္ခများမြောင် လူတို့ဘောင်ဝယ်'"မိုးလင်းကမိုးချုပ် မျက်လုံးမှိတ် လိုက်တဲ့အချိန် အတွင်း အပူ…"2 hours agodimplemit leftacomment for ဖိုးသားကြီး"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"2 hours agodimplemit leftacomment for ရှင်ဧသိကဓမ္မ (ကန့်ဘလူ)"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"2 hours agodimplemit leftacomment for ဇော်ဇော်ဦး"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"2 hours agodimplemit leftacomment for မြတ်ကိုကိုဟန်"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"2 hours agodimplemit leftacomment for thatnaing"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"2 hours agoMyaenu Kyun postedablog postလူ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် နတ်ပြည်ရောက်သူများမိမိရဲ့ Term Paper စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်…See More2 hours ago 0